मनकारी प्रमोद ; जसले महामारीमा बर्दगोरियाका ६५ परिवारलाई गरे खाद्यान्न सहयोग – Himalitimes
२०७८ जेष्ठ २२ १८:३१ मा प्रकाशित
बौनियाँ,कैलाली । प्रवासी नेपाली संघ भारत केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य समिति इन्चार्ज एवं अध्यक्ष र नेकपा एमालेका युवा नेता प्रमोद सिंह साँउदले बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं. २ झगडपुरमा खाद्यान्न सहयोग गरेका छन । जसको कोही छैन त्यसको हामी छौ भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडी बढिरहेका नेकपा एमालेका युवा नेता तथा युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नेत्र भण्डारीको पहलमा भारतको लखनउमा बसोबास गर्दै आएका साउदले सो खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन ।
प्रवासी नेपाली संघ भारत केन्द्रिय सचिवालय सदस्य साउदले आफनो स्वर्गीय पिता नन्द सिंह साउदको सम्झनामा पालिकाका वडा नं. १ र २ का ६५ घरपरिवारलाई शनिबार खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन । यो महान कार्यमा आफुलाई पहल गर्ने नेकपा एमालेका युवा नेता तथा युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नेत्र भण्डारीलाई धन्यबाद समेत व्यक्त गरेका छन ।
शनिबार बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं १ र २ मा रहेको झगडपुरका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ६५ घरपरिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका हुन् । प्रति घर परीवारलाई १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन, एक प्याकेट खाने तेल र साबुन,सोडा,मसाला प्याकेट वितरण गरिएको हो ।
खाद्यान्न सामाग्री बुझ्दै गंगा आउजीले यो खाद्यान्न सामाग्री आफूहरुका लागि ठूलो राहत भएको बताईन् । उनले भनिन यो महामारीको समयमा युवा नेता भण्डारीको पहलमा कर्मथलो भारतमा बनाई यो सहयोग गरीदिने प्रमोद सिंह साउदले दिएको सहयोग हाम्रा लागि धेरै ठूलो हो । अहिले ज्याला मजदुरी पनि बन्द छ भने अरु केही कमाई हुने बाटो छैन् । भोकै बस्नु पर्ने बेलामा उहाँको सहयोगले ठूलो राहत दिएको छ ।’
साथै बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष भेखु चौधरीले भारतमा बस्दै आएका साउदले गरेको यो खाद्यान्न वितरणको प्रशंसा गर्दै महान कार्यका लागि धन्यबाद व्यक्त गर्नुभयो । यतिखेर सरकार मात्र नभनी आ आफनो क्षेत्रबाट सक्ने जतीले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो । आफु स्थानिय सरकारको वडा अध्यक्ष भए पनि थुप्रै नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुदा खाद्यान्न सहयोग नभए पनि अन्य क्षेत्रबाट सहयोग गरेको बताउनु भयो ।
यस्तै साउदकी दिदी मिना साउदले भाईले यो महामारीमा नहुनेका लागि थोरै भएपनि सहयोग गरेर महान कार्य गरेको बताउनु भयो ।
प्रवासी नेपाली संघ भारत केन्द्रिय सचिवालय सदस्य साउदले आफनो फेसबुक पेजमा लेखे बमोजिम आफुहरुको यो यात्रा तब सम्म जारि रहन्छ, जबसम्म सबैको घरघरमा चुलो बल्दैन । साउदले भने हामि आफु एक छाक नखाएर भए पनि यस्ता दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका लागी निरन्तर अघि बढी रहने छौ ।
युवा नेता नेत्र भण्डारीले बर्दगोरियाको वडा नं. १ र २ का दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुलाई आफनो पहलमा युवा मित्र साउदले सहयोग गरेको बताए । उनीहरुलाई रोग भन्दा पनि बढि भोकको चिन्ता छ । आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न अहिले ग्रार्हो अवस्थामा केही सहयोग गर्नु पर्छ भनेर सहयोग गरेको बताए । नेता भण्डारीले भने, ‘यस महामारी घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यवसायीहरुले मानवीय काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
युवा नेता भण्डारीले यो भन्दा पहिले पनि,लम्कीचुहाका विभिन्न बस्तीमा खाद्यान्न सहित सुरक्षाकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री वितरण गरी सक्नु भएको छ ।
कोरोना पोजेटिभ किशोरीलाई जबर्जस्ती गरेको आरोपमा इन्जिनियर पक्राउ